myokoko's Page - Myanmar Network
အမှန်တကယ်အောင်မြင်ရန် လိုအပ်သောလျှို့ဝှက်ချက်များ-ကြည်အေးခင် ( စာအုပ်အညွှန်း )
Started May 7, 20140Replies 1 Like
ဤစာအုပ်လေးသည် စာအုပ်အမည်လေးအတိုင်း အမှန်တကယ်တိုးတက်အောင်မြင်လိုသူများအတွက် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လိုအပ်ချက်လေးများကို လိုရင်းတိုရှင်းနှင့် ထိထိမိမိတင်ပြထားသော စာအုပ်ဖြစ်သည်။ဘဝကို ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ် ဘယ်လိုခံယူချက်နဲ့ ကျော်ဖြတ်နေပါသလဲ။စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကို…Continue
Started Aug 7, 20130Replies 1 Like
ခေါင်းဆောင်မှု အရည်အသွေး (၁၀) ချက် ၁။ သိလိုစိတ် ပြင်းပြမှု (Curiosity)ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ မိမိလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းအတွက် အကျိုးရှိစေနိုင်မဲ့ အရာမှန်သမျှကို သိလိုစိတ် ပြင်းပြမှု ရှိတာကို ပြရမယ်။ သူ့ရဲ့ လုပ်ငန်း အ၀န်းအ၀ိုင်း အတွင်းမှာရှိနေတဲ့…Continue
သွားတိုက်ရာတွင် မှားယွင်းတတ်သော အချက်( ၁၀ )ချက်
Started this discussion. Last reply by Phyu Phyu Thin Jan 21, 2014. 1 Reply6Likes
သွားတိုက်ရာတွင် မှားယွင်းတတ်သော အချက် ( ၁၀ )ချက် သွားတိုက်ခြင်းသည်လူအများနေ့စဉ်ပြုလုပ်ကြသည့်အကျင့်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။အကျင့်ဆိုသည်မှာ ပေါ့လျော့တတ်ပါသည်။ နေ့စဉ်သွားတိုက်သော်လည်း ဂရုစိုက်ပြီးစနစ်ကျစွာမတိုက်ပါက…Continue
အဘိဓမ္မာနည်းအရ သိရက်နဲ့ပြုတဲ့ အကုသိုလ်နဲ့ မသိဘဲနဲ့ပြုတဲ့အကုသိုလ် ဘယ်သူကပိုအပြစ်ကြီးသနည်း။ လောကသဘောအရတော့ သိရက်နဲ့လုပ်တဲ့အကုသိုလ်က အပြစ်ပိုကြီးတယ်ပြောကြပေမဲ့ အဘိဓမ္မာနည်းအရကတော့ မသိဘဲပြုတဲ့ အကုသိုလ်ကအပြစ်ပိုကြီးပါတယ်။ဥပမာ-မကောင်းတဲ့အစားအစာကို…Continue
myokoko has not received any gifts yet
At 20:55 on February 25, 2012, painghoone said…
လာလည်ပါတယ် ခဗျာင်္။ လက်ခံမလား။ အခုလိုတွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူပါဗျာ။ ဆလိုင်းပိုင်ဟုန်း salailunglaing@gmai.com
At 14:16 on January 6, 2012,ွှ့Thin Thin Aung said…
At 17:55 on December 31, 2011, Kg Myatthu said…
လာလည်သွားတယ်နော်။ သူငယ်ချင်းအဖြစ်လက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ။
At 14:52 on December 12, 2011, eichanlinn said…
At 19:34 on November 8, 2011, စောနန်း ဒေဝီ said…
At 20:39 on October 27, 2011, စောနန်း ဒေဝီ said…
At 23:56 on October 25, 2011, upskynyinyi said…